ကူညီပါရစေ – Grab Love Story
ညီညီမင်းခ လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲ ၀င်တာ နဲ့ ဆိုင်ထောင့်စား ပွဲ မှာ ထိုင်နေ တဲ့ ဖ ၀င်း မောင်ကိုတွေ့ လိုက်သည်။”ဗိုက်ဆာ နေ ပြီလား ကွ” “မ ဆာ သေး ပါ ဘူး ဆ ရာ ”ဒိုး တော့ …အေး အေး ဆေး ဆေး သာ သွား ၀ါး.. ဖေ ၀င်း မောင်..အ ပြန်ကျ ရင်ဟိုဘက်လမ်း ထိပ်က ကျော်ကြီး ကိုချိန်း ပေးလိုက်….ကိုယ်ဒီမှာ ဘဲ ရှိမယ်..အ ရေး ကြီး ရင်ဖုန်း ခေါ် လိုက်””ဟုတ်ပြီ ဆ ရာ”
အ နား ရပ်စောင့်နေ တဲ့ စား ပွဲ ထိုး လေး ကိုလဘက်ရေ မှာ ဖို့လုပ်ပြီး မှနေ့ လည်စာ အ ချိန်ရောက်နေ တာ သ တိရ ပြီး မြေ အိုး မြီး ရှည်မှာ လိုက်သည်..။ ဆိုင်အ ပြင်ဖက်ကိုမျက်နှာ ပေး ပြီး ထိုင်သည်..။ဆိုင်ရဲ့ မျက်နှာ ချင်း ဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ ၆ ထပ်တိုက်ပေါ် တက်တဲ့ လှေခါး ပေါက်ကိုမျက် ခြေမပြတ်ကြည့်ရတဲ့ ဖေ၀င်း မောင် ရဲ့ အ လုပ်ကိုသူထ မင်းစား သွား တုံး ခ ဏ ၀င်တာ ၀န်ယူပေး ဖို့ပါ..။ ရောက်လာ တဲ့မြေ အိုး မြီး ရှည်ကိုစား လိုက်သည်။
စား ပွဲ ပေါ် ချ ထား တဲ့ ညီညီ့ဖုန်း မြည်လာသည်။ ကော်လာ အိုင်ဒီကို ကြည့်လိုက်တော့ ဟန်တင်..။ ကျောက်မြောင်း ဖက်မှာ တာ ၀န်ချ ထားတဲ့ သူ့လူတ ယောက်..။”အေး…ဟန်တင်…ဘာ အ ရေး ကြီး လဲ…ဘာ ထူး လဲ…“”ထူး တယ်ဆ ရာ ညီ ပစ်မှတ်က မျက်နှာ သစ်တွေ သုံး နေ တယ်လို့သ တင်း တ ခုတက်လာ တယ်ကျနော်ဒီဖက်မှာ အ ပိုင်စောင့်နေ တယ်ဗိုလ်မိုး နဲ့ ပိစိလဲ ရှိတယ်”
“ကောင်း တယ်ဟန်တင်..ဆက်လုပ်..အ ကြောင်း ထူး ရင်ခေါ် လိုက်..ဘက်ကပ်လိုရင်တော့စိုး ကျော်ဆန်း ဆီကိုစက်နဲ့ လှမ်း ခေါ် လိုက်..””ဟုတ်ကဲ့ ဆ ရာ ညီ..”ညီညီဖုန်း ချ ပြီး မြီး ရှည်ဆက်စား မ လို့ကြံနေ ဆဲ မှာ ဘဲ တ ဖက်က တိုက်လှေခါး အ ၀င်မှာ တိုက်ပေါ် ကိုတက်မဲ့ မိန်း မ တ ယောက်ကိုတွေ့ လိုက်တာ ကြောင့်ဆက်မ စား ဖြစ်တော့ ။
စား ပွဲ ပေါ် ကို မြီး ရှည်အ တွက်ငွေ ချ ထား လိုက်ပြီး ဆိုင်ထဲ က ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်ပြီး လမ်း တ ဖက်ခြမ်း ကတိုက်ဆီကိုဦး တည်လိုက်သည်..။စော စော က သူမြင်လိုက်တဲ့ အ ပြာေ၇ာင်ဝတ်စုံနဲ့ မိန်း မ က လှေခါး က အ ပေါ် ကိုတက်သွား ပြီ..။ ညီညီလှေခါး ကိုခပ်သွက်သွက်လေး တက်သည်။ အာ ပါး..အ ပေါ် ဆုံး လွှာ အ ထိတက်သွား တာ ဘဲ။
အင်း…တံခါး ခေါက်နေ ပြီ….။ ညီညီလှေခါး အ ကွယ်က ကွယ်ပြီး ချောင်း ကြည့်လိုက်သည်..။ တံခါး ခေါက်နေ ပြန်သည်။အ ထဲကတခုခုမေး ပုံရသည်။သဲ သဲ ကွဲ ကွဲ မ ကြား ရ..။ မိန်း မ က “တ ယောက်ထဲ ပါ..ဘယ်သူမှမ ပါ ပါ ဘူး..” လို့ပြန်ပြော တာ ကြား ရ သည်..။ချောက်က နဲ တံခါး ဖွင့်လိုက်သံကြား လိုက်ရ သည်..။
”ကဲ…မြန်မြန်လာ…နောက်ကြောင်း ရှင်း ရဲ့ လား”အ ထဲ က တံခါး ဖွင့်ပေး တဲ့ လူက လှေခါး အ တက်ကိုလှမ်း ကြည့်ရင်း မေး သည်..။” ရှင်း ပါ တယ်…ကျ မ တ ယောက်ထဲ ပါ…”” ၀င်…မေ စီက ဘယ်လောက်များ များ ပေး လိုက်လဲ..””မ သိဘူး ..ဒီအိတ်တ လုံး ဘဲ ပေး လိုက်တယ်..ကျ မ က ဘာ မှမ သိဘူး ကျ မ တာ ၀န်က ဒီအိတ်ပို့ပေး ဖို့ပါ ဘဲ” ”ကဲအ ထဲ ၀င် မြန်မြန်” ” မ ၀င်တော့ ဘူး..ဒျီအိတ်ပေး ပြီး ရင်ကျ မ တာ ၀န်ကျေ ပြီလေ””နေ အုံး…စစ်ကြည့်ရ အုံး မယ်…အ ထဲ ၀င်…”
အ ပြာ ရောင်ဆင်တူမိန်း မ အ ခန်း ထဲ ကိုဝင်ပြီ။
ညီညီတ ဟုန်ထိုး ပြေး သွား ပြီ။မိန်း မ အ နောက်က အ တင်း တိုး ပြီး အ ခန်း ထဲ ခုန်ဝင်လိုက်သည်..။ အ ထဲ က လူက ညီညီ ကို မြင်လိုက်တာ နဲ့ အ ရမ်း လန့်သွား ပြီး“ဟေ့ ကောင်..မင်း ဘာ ၀င်လာ တာ လဲ…ဘာ ကောင်လဲ..” ဆို ပြီး ညီညီ ကို အော်ဟောက် လိုက်သည်။မိန်း မ လဲ ညီညီတွန်း ၀င်လာ တဲ့ အ ရှိန်ကြောင့်လဲ ကျ သွား သည်။
ညီညီက သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုး စား လာ တဲ့ အ ခန်း ရှင်လူကိုဦး အောင်လက်ပြန်ဖြတ်ရိုက်သည်..။ဖြောင်း က နဲ အ သံနဲ့ အဲ ဒီလူကြမ်း ပြင်ပေါ် ကိုဝုန်း က နဲ လန်ကျ သွား သည်..။“ ဟိတ်..မ ထ နဲ့ ….ဟိုကောင်မ ရော မထနဲ့ ငါ က မူး ယစ်အ ထူး က”ညီညီက အ ပြင်ထုတ်ဝတ်ထား တဲ့ စ ပို့ရှပ်အောက်ထိုး ထား သော သေ နတ်ကို ဆွဲ ထုတ်လိုက် ပြီး ပြ သည်။
၈ျင်း ဘောင်း ဘီရှေ့အိပ်မှာ ချိတ်ထား တဲ့ စီစစ်ရေး ကပ်ပြား ကိုလဲ ပြ သည်။” ဒုရဲ အုပ်ညီညီမင်း ခ ဆိုတာ ငါ ဘဲ…မ ထ နဲ့ မ လှုပ်နဲ့ ..တ ကယ်ပစ်မှာ”ဘောင်း ဘီနောက်ဖက်အိပ်ထဲ က လက်ထိပ်ကိုထုတ်ပြီး အိမ်ရှင်လူကိုခတ်သည်..။ အ ပြာေ၇ာင်ဝတ်စုံနဲ့ မိန်း မ က ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်နေသည်..။ အ ရမ်း ကြောက်နေ သည်..။မျက်နှာ လေး နီပြီး တုန်နေ သည်။ ဟမ်း ဖုန်း ကို ထုတ်ပြီး သူ့တ ပည့်တွေ ကိုခေါ် ဖို့လုပ်သည်။
“ဟေ့ ကောင်..မင်း နာ မယ်ပြော..”“ ကျ နော့်နာ မယ် မာ လစ်ပါ ဆရာ” “ဟိတ်..ဟိုတ ယောက် နင့်နာ မယ်ရော”” ကျ မ…ကျ မ နာ မယ် ..ယွန်းသက်ဇင်ပါ…ကျ မ…..ကျ မ..ဒီအိတ်ကိုဒီလာ ပို့ဆိုလို့လာ ပို့တာပါ”အ ခုမှအဲ ဒီမိန်း မ ကိုညီညီသေသေချာချာ ကြည့်လိုက်မိသည်.။ အား ပါး….တော်တော်ငယ်သေး တဲ့ ကောင်မ လေး တ ယောက်ပါ လား..။ ယွန်း သက်ဇင်ဆိုတဲ့ ကောင်မ လေး ကို ကြည့်နေ တဲ့ သူ့မျက်လုံး တွေ က ကောင်မ လေး မျက်နှာ က ရော သူမ ရဲ့ ကိုယ်လုံး ပေါ် ကေ၇ာ မ ဖယ်မ ခွါ နိုင်တော့ ပါ။
၀ှူး..တော်တော့်ကိုမိုက်တဲ့ ကောင်မ လေး မို့ပါ ဘဲ..။ ယ နေ့ ခောတ်စ ကား နဲ့ ဆိုရင်တော်တော်လန်း တယ်ပေါ့ ..။ ပါး စပ်က လဲ ထုတ် ပြော လိုက်မိသည်။”နင်တော်တော်မိုက်တာ ဘဲ…”“ရှင်….”ညီညီက သူမ လာ ကို့တဲ့ အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်..။ သူထင်တဲ့ အ တိုင်း အိတ်ထဲ မှာ ဘိန်း ဖြူ (ကီလိုထုတ်) တွေ။အိမ်ရှင်မာ လစ်တ ဆတ်ဆတ်တုန်နေ ပြီ။
”ဟိုကောင်…ပုံပျက်နေ ပါ လား..ပြေး ဖို့ခုခံဖို့ကြံနေ လားဒီမှာ တွေ့ လား…မင်း အ မေ လင်….ခြောက်တောင့်လုံး မင်း ဖင်ထဲ ပစ်သွင်း လိုက်မယ်“သူ့.. ပွိင့်၃၈ စ ပါယ်ရှယ်ပြောင်း တိုသေ နတ်နဲ့ လှမ်း ချိန်လိုက်သည်။ယွန်း သက်ဇင်ကိုသေ သေ ခြာ ခြာ စူး စမ်း အ ကဲ ခတ်ကြည့်တော့ ချော ရုံတင်မ က ဘူး သူမ ရဲ့ ကိုယ်လုံး က တော်တော်တောင့်တာ ပါ လား..မြန်မာဆန်ဆန်ခါး တိုအင်း ချီကျပ်ကျပ်ဝတ်ထာ တာ မို့သူမ ရင်လှလှတွေေ၇ာ သေး ကျဉ်တဲ့ ခါး လေး ကိုရော အဲ ဒီခါး သိမ်လေး အောက်က စွင့်ကား နေတဲ့ တင်စိုင်တောင့်တောင့်တွေေ၇ာ အား လုံး ရှယ်ပါ လား။
ရဲ အ ရာ ရှိလုပ်တာ လုပ်သက်တော်တော်ရ နေ ပြီဖြစ်တာ ကြောင့်စောစော ဒီအိမ်ခန်း ထဲ ရောက်ခါ စ က တည်း က (ဘက်ကပ်အ ကူခေါ် ဖို့) မိမိတို့
တပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ ကိုစက်နဲ့ ဒါ မှမ ဟုတ်ဖုန်း နဲ့ ခေါ် ရ မယ်ဆိုတာ ကိုသူသိပေ သည်။မ သိလို့မ ဟုတ်..။ ဘာ ကြောင့်လဲ ညီညီ။ယွန်း သက်ဇင်ကြောင့် ဘက်ကပ်ခေါ်ဖို့နှေး ကွေး( ဒီလေး) ဖြစ်နေ တာ။ဒီလိုအ ရှုပ်ထုပ်ကြီး ထဲ ဒီချော ချော တောင့်တောင့်လေး ရောက်နေတာ သူနှမျော နေ မိလား။
ဒီအ ကောင်း စား ချော ချော လေး ကိုထောင်ထဲ ပို့မှာ လား။ညီညီ ရဲ အ ရာ ရှိတ ယောက်အ လုပ်တာ ၀န်တွေ ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ တ လျောက် ကြီး ကြီး မား မား ..ဖေါက်ပြန်လဒ်စား ခဲ့ တာ မ ရှိသလောက်ပါ..။ညီညီ ရဲ့ဖ ခင်ဦး မင်း ခ က လဲ ရဲ မှူး အ ဆင့်ထိလုပ်ခဲ့ သူအ ငြိမ်း စား ရဲ အ ရာ ရှိကြီး တ ယောက်ဖြစ်သည်..။ ညီညီကိုလဒ်စား ခြင်း ရဲ့ ဆိုး ကျိုးတွေ ကိုအ မြဲ ပြော ပြ ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့ဆုံး မ ခဲ့ ပေ သည်..။
ညီညီလဲ အ ဖေ ရဲ့ ပြော စ ကား ကိုနား ထောင်ခဲ့ သည်။ ဟိုလူဒီလူ…အ မှု နဲ့ မ
ဆိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေ…အ သိတွေထ မင်း ကျွေး တာ လိုက်စား တာ လောက်ဘဲ ရှိသည်..။ညီညီ ခုတော့ ဒီယွန်း သက်ဇင်ဆိုသော မိန်း မ ချော လေး ကြောင့်အဂတိလိုက်စား ဖို့စဉ်း စား နေ ။ဘောင်း ဘီနောက်အိပ်ထဲ က နောက်ထပ်လက်ထိပ်တ စုံကိုထုတ်ပြီး ယွန်း သက်ဇင်ကိုန ဘေး က အပ်ချုပ်စက်တဲ့ တွဲ ပြီး လက်ထိပ်ခတ်လိုက်သည်။
ခေါင်း ထဲ မှာ ဘာ လုပ်မလဲ ညီညီစဉ်း စား အ ကြံထုတ်နေ သည်။ မာ လစ်ဆိုတဲ့ ကောင်က ရှိနေ သည်။ မာ လစ်ကိုအိမ်သာ ထဲ သူဆွဲခေါ် သည်..။ မာ လစ်…..တ ဆတ်ဆတ် နတ်ပူး သ လို …… တုန်ရီနေ ပြီး“ကျ နော့်ကိုဘာ လုပ်မ လို့လဲ ဆ ရာ””မင်း ကိုစစ်စ ရာ ရှိလို့“ဆ ရာ ရယ် ကျ နော့်ကိုကယ်နိုင်ရင်ကယ်ပါ ဗျာ ကျ နော်ထောင်ထဲ မ သွား ချင်ဘူး““မင်း ဟာ တွေ က ကီလိုထုပ်တွေ..မင်း တော့ နှစ်ကြီး ပြီမာ လစ် မင်း အ ခြေ အ နေ မင်း ရိပ်စား မိမှာ ပါ“
” ဟုတ်ပါ တယ်ဆ ရာ…..ကျ နော်ထောင်ထဲ မ သွား ပါ ရ စေ နဲ့ ..ငွေ ကုန်ချင်သ လောက်ကုန် ..အ ထုပ်တွေ ဆုံး ချင်ဆုံး ပါ စေ ဘာ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ…ထောင်ထဲ မ ၀င်ရ ရင်တော်ပါ ပြီ“ ” ဒါ ဘယ်သူ့ဟာ တွေ လဲ မင်း..နောက်ကွယ်မှာ ဘာ့ စ်ရှိလား“ “ဒါ ကျ နော့်ဟာ တွေ ချည်း ပါ ဘဲ ဆ ရာ.ဘော့ စ်မ ရှိပါ ဘူး အ ပြင်က လာ ပို့တဲ့ ကောင်မ လေး က လဲကယ်ရီသက်သက်ပါ..သူ့ကို ကျ နော်ဝယ်နေကျ မိန်း မ ဒေါ် စန်းစန်း အေး က ဒီအိတ်ထဲ ဘာ ပါ တယ်ဆိုတာ တောင်ပြော ပြ တာ မ ဟုတ်ပါ ဘူး ဆ ရာ ကျ နော့်ကိုလွှတ်ပေး ပါ ဆရာ ကျေး ဇူး မ မေ့ ပါ ဘူး အခုဆ ရာ ထောင်ထဲ ပို့ရင်တ သက်တ ကျွန်း တောင်ဖြစ်သွား နိုင်ပါ တယ်ဆ ရာ..”ညီညီမာ လစ်ကိုအိမ်သာ ထဲ ပိတ်ထား ခဲ့ ပြီး အ ပြင်က ကောင်မ လေး ဆီပြန်လာ ခဲ့ သည်။
ကောင်မ လေး တ အီး အီး နဲ့ ငိုနေ ပြီ။ လက်ထိပ်ကြီး ခတ်တာ ခံထား ရ တော့ ပိုကြောက်နေ သည်။ညီညီက လက်ထိပ်ကို ဖြုတ်ပေး လိုက်သည်..။ ကဲ…မိန်း က လေး….ယွန်း သက်ဇင်..နော်…” ” ဟုတ်ကဲ” ” ဘယ်လို ဖြစ်တာ လဲ ကွာ…မင်း ရုပ်ရည်လေး နဲ့ ဒီအ မှု ကြီး နဲ့ က မင်း ယူလာ တဲ့ အိတ်ထဲ ဘာ ပါ တယ်ဆိုတာ မ သိဘူး ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့ လား“တ ကယ့်ကိုမ သိတာ ပါ အ ကို အဲ ဆ ရာ ရယ်..ကျ မ.ကိုဒေါ် စန်း စန်း အေး ဆိုတဲ့ အ မ ကြီး က ဒီလိုဘဲ ခိုင်း နေ ကျ ပါဘာ တွေ အ ထဲ ပါ တယ်ဆိုတာကျ မ ရဲ့ အ လုပ်လဲ မ ဟုတ်တာ နဲ့ ဘယ်တော့ မှမ စပ်စုပါ ဘူး”
အော် ….မင်း က ဒီလိုပို့တာ ဒီတ ခါ ထဲ မ ဟုတ်ဘူး ပေါ့ …ဟုတ်လား” “သုံး လေး ကြိမ်လောက်တော့ သူခိုင်း တာ ပို့ပေး ဘူး ပါ တယ်..”
”မင်း ကိုယ်ထဲ မှာေ၇ာ ဘာ တွေ ဖွက်ထား သေး လဲ ” ဘာ မှမ ဖွက်ထား ပါ ဘူး ရှင်..” ” တ ကယ်လား…သေ ချာ တယ်နော်…” ”ဟုတ်ကဲ့ အ ကို…မ ယုံရင်ရှာ ကြည့်ပါ.”” မင်း မှာ အ တွင်း ခံဘောင်း ဘီဝတ်ထား လား…”ယွန်း သက်ဇင်ခေါင်း လေး ငြိမ့်ပြ သည်။
သူမ ရဲ့ ဝင်း ၀ါ တဲ့ ပါး ပြင်ပေါ် မှာ မျက်ရေ တွေ စီး ကျ နေ သည်..။ ” မင်း အင်္ကျီနဲ့ ထ မိန်ကိုချွတ်လိုက်စမ်း…ဘာ တွေ ဖွက်ထား လဲ သိချင်တယ်” “မ…မ…ချွတ်ချင်ဘူး…ကျ မ ရှက်တယ်” ” ဒါ ဆိုငါ စမ်း ကြည့်ရ မ လား…မင်း မှာ လက်နက်ပါ နေ ရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မ လဲ…လာ စမ်း” “အို..”ညီညီယွန်း သက်ဇင်ရဲ့ ကျော က စ ပြီး သူ့လက်ဖ ၀ါး ကြီး နဲ့ ပွတ်ကိုင်ပြီး တ ဖြေး ဖြေး နဲ့ အောက်ဖက်ဆင်း လာ သည်။
ခါး သိမ်လေး..ဆီရောက်လာသည်..။ ကောင်မ လေး တွန့်သွား သည်..။ ဆက်ဆင်း လာ တော့ တင်ကား ကား ၂ လုံး..။ညီညီရဲ့ လက်တွေ က တင်း မာ စွန့်ကား တဲ့ တင်တွေ ကိုပွတ်သပ်နေ ပြီး တင်၂ လုံး ကြား ကိုလက်၂ ချောင်း နဲ့ ထိုး နှိုက်လိုက်သည်..။”အိ….”ပြီး တော့ တင်တွေ ကိုဆုတ်ညှစ်နေ ပြန်သည်..။
” မင်း တော်တော်တောင့်တာ ဘဲ……ဟင်း….” ညီညီရဲ့ လက်တွေ ကောင်မ လေး ရဲ့ ရင်ဘတ်ဆီေ၇ာက်သွား ပြန် သည်..။ ကောင်မ လေး မျက်လုံး တွေ မှိတ်ကျ သွား ပြီး အံကိုကျိတ်ထား သည်..။ ပွတ်သပ်နေ ရင်း မေး သည်..။ ”မင်း…အ သက်ဘယ်လောက်လဲ..” “ ၁၈ နှစ်ပါ..” ” ကျောင်း သူလား..” ” ဟုတ်ကဲ့ …” ” ကော လိပ်လား” ” ဟုတ်ကဲ့ ..ဒ ၈ုံမှာ..ဒုတိယ နှစ်ပါ” ” အိုး ယွန်း သက်ဇင်….မိုက်လှချည်လား. ကော လိပ်ကျောင်း သူဖြစ်ပြီး……ဘိန်း ဖြူ သယ်တဲ့ ကယ်ရီလုပ်ရ သ လားမင်း အ ခုဘာ ဖြစ်မလဲ သိလား…”ယွန်း သက်ဇင်ဘာ မှ ပြန်မ ဖြေ..။ခေါင်း ငုံ့ကာ မျက်ရေ တွေ သာ စီး ကျ ပြီး ရှိုက်နေ သည်။ ငိုနေ သည်။
” ထောင်ထဲ ကိုသွား ရ တော့ မှာ” ” ရှင်” ” ဘယ်လိုလုပ်ကြ မ လဲ..” ” ဘယ်လို ဘယ်လိုလုပ်ရ မ လဲ ဟင်…..ကျ မ မ သွား ပါ ရ စေ နဲ့ …ထောင်ထဲ မ သွား ပါ ရ စေ နဲ” ”မင်း အ မှု က တော်တော်ဘဲ ကြီး တယ်ဆိုတာ ရော သိတယ်နော်””ဟုတ်ကဲ့ …သိပါ တယ်ရှင် ကျ မ ကိုအ ကိုမ ကယ်နိုင်ဘူး လား ဟင် ကျ မ ကိုသ နား ပါ အ ကို…..ကျေး ဇူး ပြု ပြီး လွှတ်ပေး ပါ လား ဟင်”” ခက်တယ်ယွန်း သက်ဇင် ခက်တယ် မင်း ကိုလွှတ်ပေး ရင်ငါ့ အ လုပ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ငါ့ ပုခုံး ပေါ် က အ ပွင့်နဲ့ ရင်း ပြီး မင်း ကိုကယ်ဖို့ကမင်း ကိုလွှတ်ပေး ရင် အ ပေး အ ယူအ နေ နဲ့ မင်း က ငါ့ ကိုဘာ ပြန်ပေး မ လဲ”
” ဘာ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ကျ မ တတ်နိုင်တာ…. ပေး နိုင်တာ အား လုံး …ပေး ပါ့ မယ်အ ကို..””မင်း တတ်နိုင်တာ ဘဲ ငါ တောင်း မှာ ပါ မင်း လဲ ကော လိပ်ကျောင်း သူကြီး ဘဲ လေ..ဒီလောက်ဆိုသ ဘော ပေါက်မှာ ပါ ဒုံး မ ဝေး ပါ ဘူး ထင်တာဘဲ”ညီညီက ယွန်းသက်ဇင်ကိုသူ့ဖက်ကိုဆွဲ ယူပြီး ဖက်လိုက်သည်။ မျက်နှာ ချင်း ဆိုင်ပူး ကပ်ဖက်ထား သည်။ သူ့လက်တွေ က ကောင်မ လေး ၏ တင်သား စိုင်တင်း တင်း ကား ကား တွေ ကိုနယ်နေ သည်..။
” မင်း ငါ ဘာ လိုချင်တယ်ဆိုတာ သိတယ်မ ဟုတ်လား….””အင်း “ငါ လိုချင်တာ….. မင်း… …ဘဲ……….မင်း ကိုလိုချင်တယ်….မင်း သ ဘော ပေါက်လား…” “ပေါက်ပါ တယ်…”ယွန်း သက်ဇင်ရဲ့ ပေါင်တန်ရှည်တွေ ကြား ညီညီစမ်း နေ သည်…ဖေါင်း အိတဲ့ ဆီး ခုံ ကြီး ကိုညီညီလက်ချောင်း တွေ က ထ မိန်ပေါ် က ပွတ်သပ်နေ
သည်..။ယွန်း သက်ဇင်မျက်လုံး လေး တွေ မှေး စင်း ကျ သွား သည်..။ အ ကွဲ ကြောင်း ရဲ့ နှုတ်ခမ်း သား တွေ ကိုကိုင်မိနေ ပြန်သည်..။
” ဒါ ကိုမင်း ဘယ်လိုခေါ် လဲ…”“ ရှင်….””ဟော ဒီဟာ…..မင်း ရဲ့ ပေါင်ကြား က ဟာ ကိုမင်း ဘယ်လိုခေါ် လဲ…”ယွန်း သက်ဇင်မ ဖြေ….။ ခေါင်း ငုံ့ ပြီး ငြိမ်နေ သည်…။
ညီညီက ခပ်မာမာ ထပ်မေး သည်..။“ဟိတ်…ဖြေ လေ….ဘာ တိတ်နေ တာ လဲ…..”ယွန်း သက်ဇင်လေ သံနဲ့ တိုး တိုး လေး….. “ စောက်ပတ် ”…………. လို့ပြော သည်…။
” မင်း စောက်ပတ်ကိုငါ့ ကိုပေး မှာ လား…” ခ ဏ တွေ ဝေ နေ ပြီး မှ”အင်း…”
ယွန်းသက်ဇင်ခေါင်း ငြိမ့်ပြ သည်..။“မင်း မှာ ရီး စား ရှိလား..” ” ဟင့်အင်း..မ ရှိဘူး….” ” အ ရင်ကေ၇ာ မ ရှိဖူး ဘူး လား…” ” မ ရှိဖူး ပါ ဘူး..” ”ယောက်ကျား နဲ့ ကော အိပ်ဖူး လား….သိတယ်မ ဟုတ်လား …လိုး တာ လေ…” “ဟင့်အင်း….ကျ မ ဘာ မှမ ဖြစ်ဖူး ပါ ဘူး.. မ အိပ်ဖူး ဘူး” တုန်ရီတဲ့ အ သံလေး နဲ့ တိုး တိုး ဖြေ သည်..။
” မင်း က အ ပျို စစ်စစ်ပေါ့ …ဟုတ်လား….” ” ဟုတ်ကဲ့ ….” ” မင်း မှာ မိဘ တွေ ရှိလား…” ” အ မေ ရှိတယ် အ ဖေ က ဆုံး တာ ကြာ ပြီ..ကျ မ ငယ်ငယ်က ဘဲအ မေ လဲ ကြိုး စား ပြီး အ လုပ်လုပ်တာ ပါ ဘဲ…..ဒါ ပေ မဲ့ …ကံဆိုး မ သွား ရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသ လို…လုပ်သ မျှ ရှုံး….အ ရင်း ပြုတ်…ဆင်း ရဲတွင်း က မ တက်နိုင်ဘူး..တော်တော်အ ခက်အ ခဲ တွေ့ ခဲ့ ပါ တယ်….ဒါ ကြောင့်ကျ မ အလုပ်ထွက်လုပ်တာ ပါ..ကျ မ ဘယ်လိုမှထောင်ထဲ မ သွား နိုင်ဘူး….ကျ မ အ မေ လဲ ဒီလို ဖြစ်တာ မ သိစေ လိုဘူး”
“ကောင်း ပြီလေ…မင်း ပြောတာ မှန်ပါ တယ်…မင်း ထောင်ထဲ မ သွား သင့်ဘူး….မင်း ငါ လိုချင်တာ တွေ အ ကုန်ပေး ရင်မင်း.. မ သွား စေ ရ ဘူး အဲ ငါ ကျေနပ်တဲ့ ..အ ထိမင်း ပေး ရ မှာ နော်”ယွန်း သက်ဇင်ခေါင်း ညှိမ့်ပြ သည်။” ဟုတ်ကဲ့ အ ကို…..ထောင်ထဲ မ ရောက်ရင်တော်ပါ ပြီ.. ထောင်ထဲ ရောက်ဖို့မ ရောက်ဖို့က အ ကို့အ ပေါ် ဘဲ လုံး လုံး မူတည်နေ ပါ တယ်အ ကိုတောင်း ချင်တာ တောင်း ပါ..အ ကုန်ပေး ပါ မယ်….”သူမ အ တွက်ရွေး စရာ လမ်းမရှိ။ “ကျား သ နား မှနွား ချမ်း သာ မယ် ”ဆိုသ လိုအ ခြေ အ နေ ပါ။
ညီညီဖုန်း ဆက်သည်။ထ မင်း စား သွား ခိုင်း လိုက်တဲ့ သူ့တပည့်ရဲ ကြပ် ဖေ ၀င်း မောင်ဆီကို ဖြစ်သည်။” ဖေ ၀င်း မောင်…စား ပြီး ပြီလား…”” ဟုတ်ကဲ့ ဆ ရာ..ပြီး ပြီကျော်ကြီး ဆီကျ နော်ရောက်ပြီကျ နော်သူ့ကိုသွား စား ခိုင်း လိုက်မယ်…”” အေး …ကောင်း တယ်သူပြန်လာ ရင်မင်း တို့၂ ယောက်အဲ ဒီမှာ ဘဲ အ တူနေ ကြဒီမှာ ငါ ရှိနေ တယ် မင်းကိုမ လိုဘူးဟုတ်ပလား”” ဟုတ်ကဲ့ ဆ ရာ”“ကဲ….ယွန်း သက်ဇင်….မျက်ရေ တွေ သုတ်အ ခုဒို့ဒီက နေ သွား ကြ မယ်သွား ဖို့ပြင်ဆင်တော့ ”ညီညီအိမ်သာ ထဲ က မာ လစ်ဆီသွား ပြန်သည်။
”မာ လစ်….မင်း ဖြစ်ချင်တဲ့ အ တိုင်း..မင်း ကိုငါ လွှတ်ပေး လိုက်မယ် ငါ့ ကိုဘာ မှပေး စ ရာ မ လိုဘူး….ဘိန်း ဖြူ တွေ တော့ ငါ ပိုင်ရှင်မဲ့ အ ဖမ်း ပြ လိုက်
မယ်…ကျေ နပ်လား”“ဟုတ်ကဲ့ ပါ ဆ ရာ…..ကျေး ဇူး ကြီး ပါ တယ်ဆ ရာ.ထောင်ထဲ မ ၀င်ရ ရင်ကျေ နပ်လှပါ ပြီ..”“ငါ့ ကိုတော့ ပြန်လှန်မယ်မစဉ်း စား နဲ့ နော်မာ လစ် ရဲ ဆိုတာ မင်း တို့လည်တာ လောက်က ဒို့အိပ်နေ သ လောက်ရှိတယ်….မင်း ငါ့ ကိုဘတ်ရင်တော့ မ လွယ်ဘူး…..မှတ်..”
” ဆ ရာ ရယ်…ထောင်ထဲ မေ၇ာက်တာ ဘဲ ဆ ရာ့ ကျေး ဇူး ကြီး လှပါ ပြီ…ဘယ်တော့ မှမ ဘတ်ပါ ဘူး…စိတ်ချ ပါ…”မာ လစ်ကိုလက်ထိပ်ဖြုတ်ပေး လိုက်သည်..။ မာ လစ်မှာ မ ထင်မှတ်ဘဲ အ ဖမ်း ခံထား ရ တာ မှ ပြန်လွတ်လို့မျက်ရေ တွေ စီး ကျ လာ ရ အောင်ဘဲ ၀မ်းသာ နေ သည်။
” မာ လစ်…လစ်ပေ တော့ ..မင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ တိုက်ပေါ် က ဆင်းသွား ဝေးဝေး ကိုလစ်တော့ ကွာ…” ” ဟုတ်ကဲ့ ဆ ရာ….” မာ လစ်တိုက်ပေါ် က ဆင်း သွား ပြီး တော့ ညီညီလဲ ဘိန်း ဖြူ တွေ အ ပြည့်နဲ့ လက်ဆွဲ အိတ်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်။ယွန်း သက်ဇင် ရယ်ဒီဖြစ်ပြီလား” ဟုတ်ကဲ့ အ ကို“ကဲ….ညီမ….သွား ကြ မယ်…ဒါ နဲ့ ယွန်း လို့ခေါ် မယ်အိုကေ လား“ ” ဟုတ်ကဲ့ အ ကိုယွန်းကိုအ မေ ကေ၇ာ သူငယ်ချင်း တွေ က ပါ… ယွန်း လို့. ခေါ် ကြ တာ ပါ”ညီညီ …ယွန်း ၏ ခါး လေး ကိုဆွဲ ဖက်ပြီး တိုက်ခန်း ထဲ က ထွက်လိုက်သည်..။
ညီညီ၏ အိမ်ကိုရောက်တော့ ည ၇ နာ ရီရှိနေ ပြီ..။ယွန်း နဲ့ သူနဲ့ တ ရုပ်တန်း လမ်း ၂၀ မှာ ၀င်ပြီး ည စာ စား ခဲ့ ကြ သည်..။ ယွန်း ရဲ့ သူငယ်ချင်း ” အေးမ ” ရဲ့ အ ကူအ ညီနဲ့ ယွန်း ရဲ့ အ မေ ကိုစိတ်မ ပူဖိုယွန်း ပဲ ခူး ကိုအ လုပ်နဲ့ သွား ကြောင်း ပြော ခိုင်း သည်..။” ယွန်း…..ရေ ချိုး လိုက်ပါ လား…”ညီညီမျက်နှာ သုတ်ပုဝါ ယူပေး လိုက်သည်။ ရေ ချိုး ခန်း ထဲ ၀င်သွား သည့်ယွန်း ရဲ့ တင်တွေ တုန်ခါ သွား တာ ညီညီမြင်လိုက် ရ သည်။
တော်တော်တောင့်တဲ့ ကောင်မ လေး….ဘဲ…။ အင်း…မ ကြာ ခင်မှာ ဘဲ ယွန်း သက်ဇင်ဆိုတဲ့ ကောင်မ လေး နဲ့ သူနဲ့ ပွဲ ကြီး ပွဲ ကောင်း တွေ့ ကြ တော့ မယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင့်လဲ ညီညီစိတ်လှုပ်ရှား သ လို ဖြစ်လာ သည်..။ရေ ချိုး ခန်း ထဲ ကေ၇ သံကြား နေ ရ သည်..။ ယွန်း ရေ ချိုး နေ တာ ကို မြင်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ် လာ သည်..။ မ ထူး ပါ ဘူး……မ စောင့်နိုင်တော့ ဘူး…ညီညီသူ့လုံချည် နဲ့ တီရှပ်ကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပြီးေ၇ ချိုး ခန်း ထဲ ကိုဝင်လိုက်သည်..။
ယွန်း က ရေ ပန်း အောက်မှာ အ ၀င်တံခါး ဖက်ကိုကျော ခိုင်း ပြီးေ၇ ချိုး နေ သည်..။ ညီညီလဲ ယွန်း ကိုအ နောက်ဖက်မှသိမ်း ဖက်လိုက်သည်..။ညီညီရဲ့ လက်၂ ဖက်က ယွန်း ရဲ့ တင်း မာ ပြီး ကော့ မော့ နေ သော ရင်နှစ်လုံး ကိုဆုတ်ကိုင်လိုက်မိပြီ..။” အို….”ယွန်း လန့်သွား သည်..။ ညီညီဝင်လာ တာ သူမ မ သိလိုက်..။ မျှော်လင့်မ ထား တာ မို့တုန်လှုပ်သွား ပြီး…”ဘာ လုပ်တာ လဲ…..လွှတ်… မ လုပ်ပါ နဲ့ ….” လို့ပြော ရင်း ရုန်း သည်..။
ယွန်း ၏ ကား ဖုနေ တဲ့ တင်သား ၂ လုံး ကိုမာ မာ အ တန်ကြီး ဖိကပ်နေ တာ ယွန်း သ တိထား မိပြီး အ ရှေ့ကိုတိုး ပြီး ရှောင်ဖယ်ဖို့ကြိုး စား သည်..။ အ နောက် က ညီညီက ဆွဲ ဖက်ပြီး ကပ်ထား လို့ယွန်း ရှောင်လို့မ ရ..။ ညီညီရဲ့ လက်တွေ က အ ငြိမ်နေ တာ မ ဟုတ်.။ ရင်ထွား ထွားကော့ ကော့ တွေ ကိုဆုတ်နယ်နေ က လိုလိင်တန်က လဲ တင်ကား ကား တွေ ကိုဖိ ပွတ်နေ သည်..။ တင်နှစ်လုံး ရဲ့ ကြား ထဲအ လျား လိုက်ညှောင့်နေသည်..။
ယွန်း သူ့ကိုဆက်မ ရုန်း မိတော့ ..။ တ ကယ်တော့ ယွန်း ဘဲ သူ့ကိုသူလိုချင်တာ ပေး ပါ မယ်လို့သ ဘော တူခဲ့ တာ ဘဲ လေ..။ အ ပျို စင်လေး ဖြစ်ပြီး ယောက်ကျား နဲ့ အ တွေ့ အ ကြုံ က လည်း မ ရှိတာ ကြောင့်သာ လန့်ရှက်ပြီး ညီညီရုတ်တ ရက်ဝင်လာ ပြီး ဖက်တဲ့ အ ခါ အော်မိရုန်း မိတာ ဖြစ်သည်..။ညီညီရဲ့ အ ကိုင်အ တွယ်တွေ က ယွန်း ရဲ့ စိတ်ကို ကြွ လာ စေ တာ ကိုယွန်း မ ငြင်း နိုင်..။ မာ လစ်ရဲ့ တိုက်ခန်း မှာ က တည်း ကညီညီသူ့ကိုယ်တွေအ နှံ့ လက်နဲ့ လိုက်စမ်း ပွတ်သပ်က ထဲ က ရင်တွေ ခုန်ပြီး သွေး သား တွေ ဆူဝေ ခဲ့ ရ တာ ပါ..။
အခုလဲ ညီညီရဲ့ အ ကိုင်အ ထိတွေ က ယွန်း ရဲ့ သ ဘာ ၀ ကာ မ စိတ်ကိုနှိုး ဆွ နေ ပြီ..။ ရင်သား တွေ ကိုပယပ ပယ်နယ်နယ်ဆုတ်ကိုင်နေ တဲ့ လက်၂ ဖက် က ဖေါင်း မို့တဲ့ ဆီး စပ်က အ မွှေး နုလေး တွေ ကိုပွတ်က စား နေ ပြန်တယ်..။ သူနဲ့ ကျ မှတ သက်လုံး ဖုံး ခဲ့ သ မျှ အ ရှက်ကုန်ရ ပါ လား…ညီညီရဲ့ လိင်တန်ချောင်း ကြီး က တော့ ဆက် ညှောင့်ပွတ်နေ တုံး ဘဲ..။ညီညီက ယွန်း ကိုဆွဲ လှည့်လိုက်တော့ ယွန်း သူနဲ့ မျက်နှာ ချင်း ဆိုင်ဖြစ်သွား ရ သည်…။
“အို့….”ညီညီက ယွန်း ကိုတင်း တင်း ဖက်ထား တော့ ယွန်း ရဲ့ ရင်သား စိုင်တွေ နဲ့ ညီညီ၇ဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ တ အား ဖိကပ်နေ သည်..။ ညီညီက ယွန်း နှုတ်ခမ်း လေး ကိုဖိကပ်စုတ်နမ်း လိုက်သည်..။ မျက်လုံစုံမှိတ်ထား သည့်ယွန်း သည်တ ခါ မှယောက်ကျား တ ယောက်နဲ့ နမ်း ဘူး တာ မ ဟုတ်လို့ဘာ လုပ်ရ မှန်းတော့ မ သိ..။ ရှက်က လဲ ရှက်ကြောက်လဲ ကြောက်….တ ဆတ်ဆတ်တုန်ရီနေ သ လိုပါ ဘဲ။
ယွန်း က ဒီအ တိုင်း သူစုတ်တာ ငြိမ်နေ တော့ ညီညီကနှုတ်ခမ်း ချင်း ပူး ထား တာ ခ ဏ ခွါ လိုက်ပြီး….”ယွန်း…ကိုယ့်ကို ပြန်နမ်း လေ…ကိုယ့်နှုတ်ခမ်း တွေ ကို ပြန်စုတ်…” လို့ပြော လိုက်သည်..။ ယွန်း လဲ သူခိုင်းသ လိုသူ့နုတ်ခမ်း တွေ ကို ပြန်စုတ်ကြည့်လိုက်သည်..။ ညီညီ၏ လျာ က ယွန်း ရဲ့ နှုတ်ခမ်း လေး ကြား ၀င်ရောက်မွှေ နှောက်နေ သည်..။ ယွန်း လဲ သူမလျာ လေး နဲ့ ပြန်ထိတွေ့ ပေး လျက်ပေး လိုက်မိသည်..။ညီညီ၏ လက်တွေ က ယွန်း ရဲ့ ပေါင်ကြား ကိုပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေ ပြီ။
ညီညီရဲ့ ဖွား ဖက်တော်လိင်ချောင်း ကြီး က အ စွမ်း ကုန်မာ တောင်နေ တာ ညီညီက ယွန်း ရဲ့ လက်တ ဖက်ကိုဆွဲ ယူပြီး သူ့လိင်တန်ကြီး ဆီဆွဲ ယူပြီး ကိုင်ခိုင်း သည်…။ ယွန်း ရင်တွေ တ အား ခုန်တာ မှလိင်တန်ကြီး ကိုတအား ဘဲ ဆုတ်ကိုင် ထား မိရ သည်..။ ညီညီက မ အောင့်အီး နိုင်တော့ ပုံနဲ့ ယွန်း ကိုရေ ချိုး ခန်း ထဲ က ဆွဲ ခေါ်ကာ သူ၏ အိပ်ခန်း ထဲ ကိုရောက်ခဲ့ ကြ တာနဲ့ ကုတင်ကြီး ပေါ် ကိုနှစ်ဦး သား လှဲ ချ မိကြ လေ သည်..။
” ယွန်း ရယ်….မင်း သိပ်လှတာ ဘဲ…”ညီညီက သေ သေ ချာ ချာ တ ကိုယ်လုံး ကို ကြည့်နေ လို့ယွန်း ရှက်ပြီး သူမ ပေါင်တန်တွေ ကိုစေ့ လိုက်သ လိုရင်သား တွေ ကိုလဲ လက်၂ ဖက်နဲ့ ဖုံး ကာလိုက်လေ သည်။ ဒါ ပေ မဲ့ ညီညီက ခွင့်မ ပြု…။
” မ ရှက်ပါ နဲ့ ယွန်း ရယ်”ညီညီက ယွန်း နှုတ်ခမ်း တွေ ကို ပြန်စုတ်နမ်း လာ ပြန်သည်..။ သူ့ကို ပြန်မ နမ်း စုတ်ရင်ရေ ချိုး ခန်း ထဲ တုံး က လိုဘဲ သူ့ကိုနမ်း ဖို့ပြော လာ မှာ ကြောင့်သူမ ပြော ခင်ဘဲ သူ၏ နှုတ်ခမ်း တွေ ကို ပြန်စုတ်ပေး လိုက်လေ သည်..။
ညီညီလဲ ယွန်း ၏ ရင်သား တွေ ကိုစိတ်တိုင်း ကျ နယ်နေ ပြီ… ရင်သား ထိပ်ဖူး လေး တွေ ကိုငုံစို့လိုက်တော့ ယွန်း နှုတ်ခမ်း လေး ဟ သွားသည်။ ”အ အီး”ပန်း နုရောင်ထိပ်ဖူး လေး ကိုငုံထား ပြီး လျာ ကြီး နဲ့ ထိုး က လိနေ ပြန်သည်။ ” အို အ ကို အို”လက်၂ ဖက်က ရင်သား တွေ ကိုချေ နယ်နေ စဉ် ညီညီလျာ ကြီး ကအောက်ဖက်ကိုတ ရွေ့ ရွေ့ ဆင်း ပြီး ၀မ်း ပြင်သား ရှပ်ရှပ်လေး ကိုယက်နေ ပြန်သည်။
ယွန်း ယား ကျိကျိနဲ့ တ ထွန့်ထွန့်လူး နေ ရ သည်..။ချက်ပေါက်လေး ကိုလျာ ကြီး နဲ့ က လိနေ ပြန်သည်..။ သိပ်မ ကြာ လိုက်ဘဲ ဖတ်က နဲ သူ့နှခေါင်း ချွန်ချွန်ကြီး နဲ့ ဆီး ခုံဖေါင်း ဖေါင်း အိအိကြီး ကိုလူး လှိမ့်ပွတ်သပ်နမ်း နေ ပြန်သည်..။ ယွန်း ရဲ့ ၁၈ နှစ်လုံး လုံး ထိန်း သိမ်း လာ ခဲ့ တဲ့ အ ပျို စင်အ ကွဲကြောင်း လေး မှာ ညီညီရဲ့ အ ကိုင်အ တွယ်အ ယက်အ စုပ်တွေ ကြောင့်ကာ မ အ ရေ ကြည်တွေ စိုစိုရွှဲ နေ ပြီ.။ အ မွှေး နုနုလေး တွေ ခပ်ပါး ပါး ပေါက်နေတဲ့ ယွန်း ရဲ့ အ လှပန်း လေး ဆီကိုညီညီရဲ့ လျာ ကြီးေ၇ာက်ရှိသွား ပြီး အ ထက်အောက်စ ပြီး လျက်လေသည်။
ယွန်း သူ့ခေါင်း က ဆံပင်တွေ ကိုယောင်ယမ်း ပြီး ဆုတ်ကိုင်လိုက်မိသည်..။ ညီညီက တော့ ယွန်း ၏ ခါး သိမ်လေး ကိုလက်တ ဖက်က ဆုတ်ကိုင်ထား သ လိုတ ဖက်က ယွန်း ရဲ့ ရင်သား တ ဖက်ကိုကိုင်ထား ပြီး အ ကွဲ ကြောင်း ( စောက်ပတ် ) လေး ကိုလျာ နဲ့ လျက်နေ ရာ ယွန်း မှာ အ ရ သာ ထူး ကဲ လှတာ ကြောင့်ပါး စပ်က တ ဟင်း ဟင်း နဲ့ ညည်း ညူ နေ ရ လေ သည်။
ညီညီ၏ လျာ က ယွန်း ရဲ့ (ရ တ နာ ရွှေကြုတ် ) နှုတ်ခမ်း သား နုနုလေး ရဲ့ ကြား ထဲ ကိုထိုး ဆွ နေ ပြန်ရာ ယွန်း မှာ တင်ကား ကား များ တ ဆတ်ဆတ် ခါ ပြီး ကော့ ကော့ ပေး လေ သည်..။ ညီညီ လဲ ယွန်း ရဲ့( ရ တ နာ ရွှေကြုတ် ) ကိုအား ပါး တ ရ ယက်စုတ်ပေး တာ ကိုရပ်လိုက်ပြီး ယွန်း ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲ ကား လိုက်ပြီး ယွန်း အ ပေါ် ကိုတက်မှောက်နေ ရာ ယူလိုက်ပြီး…”ယွန်း …ကိုယ်ယွန်း ကိုချစ်တော့ မယ်နော်..” လို့ပြော လိုက်ပြီး သူ၏ မှို ပွင့်ထိပ်ဖူး ကား ကား ကြီး နဲ့ အ တန်ချောင်း ရှည်ကြီး ကိုယွန်း ၏ အ လှရ တ နာ ( စောက်ပတ် )အကွဲ ကြောင်း လေး မှာ တေ့ လိုက်လေ သည်။
ယွန်း မှာ လဲကာ မ စိတ်တွေ အ လွန့် ကိုဘဲ ပြင်း ထန်နေ ပြီမို့ခေါင်း လေး ကို ငြိမ့်ကာ…” အ ကို့သ ဘော ပါ ဘဲ အ ကို…” လို့ပြန်ပြော ပြီး ညီညီ့ကျော ပြင်ကြီး ကို ဖက်လိုက်လေ သည်..။ ညီညီလည်း ယွန်း ဟာ အ ပျို စစ်စစ်လေး လို့သိထား တာ မို့သူ့လိင်တန်ကြီး ကိုထိပ်ဖျား လေး တင်ဘဲ ဖြေးဖြေး လေး ထိုး ထည့်လေ သည်..။ လိင်ချောင်း ထိပ်ပိုင်း က တင်း တင်း ကျပ်ကျပ်ကြီး ယွန်း ရဲ့ ရ တ နာ လေး ထဲ ရောက်ရှိနေ ပြီ..။
“ အိုကေ လား ဟင်…ယွန်း…”” အင်း…..”ညီညီလဲ မိန်း မ များ စွာ ကိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့ ဘူး သူတ ယောက်ဖြစ်သ လိုအ ပျို စစ်ကိုပါ ပန်း ဦး ခြွေ (ပါ ကင်ဖွင့် ) ဘူး သူဖြစ်တာ ကြောင့်ဖြေးဖြေး ချင်း တ ထစ်ချင်း ရှေ့တိုး နောက်ငင်ထိုး လိုက်ဆုတ်လိုက်နဲ့ လိုရာ ပန်း တိုင်ရောက်ရန် အ ချိန်ယူပြီး ကြိုး စား တော့ သည်..။ ယွန်း သည်ပ ထ မ ဦးဆုံး အ ကြိမ်မို့နာ ကျင်ပေ မဲ့ ညီညီရဲ့ နှိုး ဆွ မှု တွေ ကြောင့်သည်လိင်တန်ကြီး ကိုသူမ အ ထဲ ထိုး သွင်း စေ ချင်စိတ်တွေ က ဖြစ်ပေါ် နေ ခဲ့ တာ မို့ပေါင်တွေ ကိုအ စွမ်း ကုန်ကား ပေး ပြီး ညီညီတ ဖြေး ဖြေး ချင်း အ သွင်း အ ထုတ်လုပ်ပေး တာ ကိုသ ဘော ကျ ခံယူနေ ပေ သည်..။
” နာ လာ ဟင်…ယွန်း…” ” နာ တယ်…ဒါ ပေ မဲ့ ရ တယ်အ ကို….လုပ်ပါ….လုပ်…ဖြေး ဖြေး..လုပ်…“ ညီညီလဲ ယွန်း ခံနိုင်နေ တာ ကိုသိရ တာ ကြောင့်ခပ်ဖြေး ဖြေး ချင်း တ ချက်ချင်း ”လုပ် ” လေ သည်..။ယွန်း ရဲ့ စောက်ရေ တွေ စိုရွှဲ နေ တာ
ကြောင့်လုပ်လို့ရ တာ လာူမ သိပါ ဘူး…….။ယွန်း မှာ တ အင်အင်နဲ့ နှုတ်ခမ်း လေး မ ဟ တ ဟ နဲ့ သူမ တင်သား တွေ ကိုကော့ ကော့ ပေး နေ ပါ သည်။
ညီညီရဲ့ လိင်ချောင်း ကြီး ဟာ ယွန်း ရဲ့ ရ တ နာ ပန်း ပွင့်လေး ထဲ တင်း ကြပ်နေ တာ ကြောင့်တ ချက်ထိုး ထုတ်လိုက်တိုင်း ညီညီအ တွက်အ လွန်ဘဲ အ ရ
သာ ကောင်း လွန်း နေ သ လိုယွန်း မှာ လဲ သည်လိင်တန်ကြီး တိုး ၀င်လာ တိုင်း သူမ ရဲ့ အ ပျို စင်ပန်း က လေး ၏ အ တွင်း သား နုနုတွေ ကိုအ ပြည့်အ သိပ်
ကြီး ပွတ်တိုက်သွား တာ ကြောင့်ကာ မ အ ရ သာ ထူး ကဲ လှတယ်။
နာ ကျင်မှု ဝေ ဒ နာ ကိုကာ မ အ ရ သာ က အ နိုင်ယူသွား တယ်ပြော မ လား…တ ချက် အ ပြီး နောက်တ ချက်ထပ်လိုချင်နေ ရ ပြီ..။ ဒါ ကြောင့်တင်တွေ ကိုပင့်ကော့ ပြီး ဖြေး ဖြေး ချင်း ”ပေး” နေ တာ ကိုဘဲ အား မ ရ ဖြစ်လာ ရ ပြီး ခပ်သွက်သွက်လုပ်ပေး စေ ချင်လာ ရ သည်..။
ညီညီလဲ ယွန်း ၏ ( အ ပျို စစ်ပန်း ပွင့်လေး ) က ကျပ်လွန်း စီး ပိုင်လွန်း နေ တာ ကြောင့်အ ရမ်း ဘဲ အ ရ သာ ကောင်း လှတာ ကြောင့်ခပ်သွက်သွက်ညှောင့်ပါ တော့ သည်..။” ရ လား ဟင်…ယွန်း…အိုကေ လား…”” အင်း…အင်း…ရ တယ်…ရ တယ်…”သူ့ကိုကြောက်တာ ကြောင့်ယွန်း နာ တယ်နာ တယ်လို့ပြော ရ မဲ့ အ စား ရ တယ်ရ တယ်များ ပြော မိလေ သ လား မ သိတော့ ပါ ဘူး…။
ယွန်း လဲ ခံနိုင်လာ တာ သိရ လို့အား ရ ပါး ရ ကြီး ဘဲ ဆောင့်ပေး လေ သည်..။ကောင်း လိုက်တာ ယွန်း ရယ်……..ယွန်း ကော…ကောင်း လား…ဟင် အင်း ကောင်း တယ်အ ကို…..ကောင်း တယ်အ ရမ်းအား….ပြီး…ပြီး ပြီ ယွန်း ရယ်…..အား အင်အင်…အို….အင်း…..ယွန်းေ၇ာ ဘဲ…. အား….ကျင်တယ်…ကျင်တယ်……ယွန်း ဟာ လေး…ကျင်တယ်”နှစ်ယောက်စ လုံး ကာ မ အ ထွပ်အ ထိပ်ကို ပြိုင်တူရောက်ရှိသွား ကြ ရ လေ သည်..။ ညီညီလဲ သူ၏ လိင်တန်ကြီး ကိုယွန်း ( စောက်ပတ် ) အ ထဲ က မနုတ်ဘဲ …တပ်ရက်နဲ့ ဘဲ ယွန်း ကိုဖက်ကာ လှဲ အိပ်လိုက်လေ သည်..။
ယွန်း လဲ သူမ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ တာ တွေ ကိုမ ယုံနိုင်အောင်ပါ ဘဲ..။ အ ပျို စစ်စစ်လေး ဘ ၀ က နေ ဥ ပ ဒေ နဲ့ မ ကင်းလွတ်တဲ့ အ လုပ်ထဲ ညိစွန်း ခဲ့ ရ တာ ကြောင့်အ ပျို စင်ပန်း လေး ကိုညီညီဆိုတဲ့ ရဲ အ ရာ ရှိကိုပေး အပ်လိုက်ရ တယ်လေ..။ ပေး လိုက်ရ တာ ကိုနှမျောပေ မဲ့ သူနဲ့ ညှိလို့ရ တာ ကိုဘဲ သူ့ကိုကျေး ဇူး တင်နေ ရ တာ ပါ။ တ ကယ်တန်း ညီညီက သူမ ကိုကိုင်တွယ်တော့ ..သူမ ရဲ့ အ င်္ဂါဇာတ်ကိုယက်စုတ်ပေး တော့ ယွန်း သ ဘာ ၀ စိတ်တွေ ထ ကြွ လာ ရ ပြီး ညီညီက သူ့ကိုစပ်ယှက် ( လိုး ) တော့ လဲ ညီညီလုပ်တာတွေကိုကျေ နပ်မိရ ပြီး အ ပေး အ ယူသ ဘော ကြောင့်ပေး လုပ်ရ တယ်လို့ယွန်းအ မှတ်မ ရ တော့ ။ကိုယ့်ရီစား ချစ်သူလို့ထင်လာ မိပါ တယ်။
တသက်လုံး ဖုံး ဖုံး ဖိဖိနေ လာ ခဲ့ တဲ့ ယွန်း ညီညီရဲ့ လိင်တန်ကြီး တပ်ရက်ကြီး နဲ့ အ ၀တ်ဆိုလို့ချည်တ မျှင်တောင်မ ကပ်ဘဲ ဖြစ်နေ ရ တာ ကိုအ ရမ်း ပက်ပက်စက်စက်ကြီး ဘဲ လို့ရှက်နေ မိပါ တယ်..။ သို့ပေ မဲ့ ညီညီဆိုတဲ့ သူ့ကိုထောင်ထဲ မ ပို့တဲ့ လူကို အ လိုလိုက်ပေး ချင်တာ ကြောင့်သူဖြစ်စေ ချင်သ လိုနေ ပေး နေ တာ ပါ..။ သူစပ်ရှက် ( လိုး ) တာ ကိုလဲ ပ ထ မ ဆုံး အ တွေ့ အ ကြုံ မို့ထင်ပါ ၇ဲ့ ..။
ညီညီကိုတ ခါ ထဲ စွဲ သွားသ လိုပါ ဘဲ..။ယွန်း လဲ အ လုပ်အ ဆင်မ ပြေ တဲ့ မေ မေ့ ကိုကူချင်တာ ကြောင့်သူငယ်ချင်း မေ ဘယ်မိတ်ဆက်ပေး တဲ့ ဒေါ် စန်း စန်း အေး ဆီမှာ ကျောင်း အား တဲ့ အ ချိန် မှာဝင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ တာ ပါ..။ ဖွတ်ထွက်မှတောင်ပို့မှန်း သိဖြစ်ခဲ့ ရ တယ်ဘာ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲ မ ရောက်တာ ညီညီ့ကျေး ဇူး ပါ။ ယွန်းသာ ထောင်ကျ ရင်မေ မေ တော့ အ သဲ ကွဲ..မှာ လေ..။
ညီညီလဲ ယွန်း ရဲ့ လှပ ကျော့ ရှင်း တဲ့ ဝတ်လစ်စ လစ်အ လှအ ပ တွေ ကိုတ ၀ ကြီး ကြည့်ရင်း… ယွန်း ရင်သား တင်း တင်း တွေ ကိုစို့လိုက်…တင်ကား ကား တွေ ကိုကိုင်လိုက်လုပ်နေ တော့အ ရမ်း ကို ပြန်တောင်မတ်လာ ပါ တော့ တယ်….။ ယွန်း မျက်နှာ လေး က လဲ တ အား ဘဲ နု ချော လှပနေလို့ညီညီအ ပေး အ ယူသ ဘော သက်သက်မ ဟုတ်တော့ ဘဲ ယွန်း ကိုသ ဘော ကျ တပ်မက်မိရ တာ အ ရမ်း ပါ ဘဲ…။ ညီညီလဲ ယွန်း ရဲ့ ပေါင်တန်၂ ဖက်ကြား ထဲ ခေါင်း အပ်ပြီး ယွန်း ရဲ့ အ လှရ တ နာ ( စောက်ပတ် ) ကိုလျာ နဲ့ လျက်ပါ တော့ တယ်..။
“ အ ကို…အ ကို…အို အင် အ အ အီးဟင့် ဟင့်”ညီညီရဲ့ လျာ ကြီး က ယွန်း နုနုထွတ်ထွတ်စောက်ပတ်လေး ထဲ မွှေနှောက်က လိပေး နေ တယ်..။ ယွန်း ဖင်တွေ ဘယ်ညာ ရမ်း နေ ရ ပြီ..။ ထိလွန်း လို့နှုတ်က အ သံမျိုး စုံ ညည်း နေမိရ တယ်။ယွန်း ရဲ့ အ ရ သာ ဖူး စောက်စိလေး ကိုလျာ ကြီး နဲ့ တို့ထိက လိနေ ပြန်တယ်။
ယွန်း ရဲ့ စောက်ပတ်က သူအ ရင်ဆက်ဆံခဲ့ ဘူး တဲ့ တ ချို့ မိန်း မ တွေ လိုအ နံ့မ နံတာ တွေ့ ရ လို့ယွန်း ဟာ သူမ ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်း အောင်နေ တဲ့ မိန်း က လေး တ ယောက်ဆိုတာ ညီညီသိလိုက်ရ တယ်…။ အား ရ ပါး ရ ကျေ နပ်အောင်ယက်နေ ပြီး…..ယွန်း ကောင်း လား လို့လဲ ခ ဏ ခဏ မေး တတ်သေး တယ်..။ ယွန်း က ဖြေ ရ မှာရှက်လို့မ ဖြေ ရင်လဲ သူမ ကြိုက်..။ အ တင်း ကြီး ဘဲ ဖြေ ခိုင်း တယ်။ တော်တော်ဆိုး တဲ့ အ ကို…။ခေါင်း ညှိမ့်ပြ တာ လဲ မ ကျေ နပ်သေး။
ညီညီရဲ့ ကာ မအ ရှိန်က မြင့်သ ထက်မြင့်လာ ပြီး..ယွန်း ကိုဆွဲ မှောက်လိုက်ပြီး…ယွန်း ရဲ့ ဖင်ဖွေး ဖွေး ၂ လုံး ကိုဆွဲ ဖြဲ လိုက်ပြီး ဖင်ပေါက်ညို ညို လေး ကိပါ လျာ ကြီး နဲ့ ယက်ပါ တော့ သည်။အို…အို……အိ…အိ……အား……..ယွန်း ဘယ်လိုပြော ပြ ရ မှန်း တောင်မ သိတော့ ဘူး တ ခါ မှမ ကြုံဘူး တာ တွေ ကြုံနေ ရတယ်…။ ပိုဆိုး တာ ကယွန်း ကိုသူအ ပီအ ပြင်ယက်ပေး အ ပြီးယွန်း မျက်နှာ ရှေ့သူ့လီး တန်ကြီး ကိုလာ ထိုး ပေး တော့ တာ ပါ..။သူ့ကိုမော့ ကြည့်လိုက်တော့ သူက တလုံး ထဲ…စုတ်…လို့တိုး တိုး လေး အ မိန့်ပေး လိုက်ပါ တယ်။
“ယွန်း..ယွန်း….မ…မ…မ.လုပ်တတ်ဘူး…အ ကို“ ” လုပ်ကြည့်….လုပ်တတ်သွား မှာ ပါ…စုတ်လိုက်..ယွန်း…..“ယွန်း သူ့အ မိန့်ကိုမ လွန်ဆန်နိုင်ဘူး ရှင်…သူ့လီး တုတ်တုတ်ကြီး ကိုငုံယူလိုက်ပြီး စုတ်ကြည့်လိုက်ပါ တယ်..။စိတ်ထဲ မှာ ရှက်ပြီး ၀မ်း နည်း သ လိုဖြစ် တာ ပေါ့ ..။ဒါ ပေ မဲ့ သူလဲ ယွန်း စောက်ပတ်ကိုယက်ပေး ခဲ့ တဲာလေ..။ူကောင်း အောင်လဲ ပြန်လုပ်ပေး ရ မှာ ဘဲ..။ဘာ ဘဲ ဖြစိဖြစ်သူ့စ ကား တွေ ကိုမ လွန်ဆန်နိုင်ဘူး..။
အင်း…..ဟုတ်ပြီ…ဟုတ်ပြီ…သွား နဲ့ မ ထိမိစေ နဲ့ …အို…ဟုတ်တယ် …ဒီအ တိုင်း ဘဲ…လျာ လေး နဲ့ ရစ်ပတ်ပေး..ထိုး ပေး”ညီညီရဲ့ သင်ပြ မှု နဲ့ ယွန်း လီး တန်ကြီး ကိုစုတ်ပေး နေ ပါ ပြီ..။” ဂွေး စိတွေ ကိုလက်တ ဖက်နဲ့ ဖွ ဖွ လေး ပွတ်ပေး…“
သူခိုင်း တဲ့ အ တိုင်း လုပ်ပေး နေ တာ….ယွန်း လဲ စိတ်တွေ ပြင်း ထန်လာ ရ ပြီး ညီညီလီး ကြီး ကိုအား ရ ပါး ရ ဘဲ စုတ်နေ မိရ ပါ တယ်..။
” နောက်ကို..မ ပြော ရ စေ နဲ့ နော်ယွန်း…..ကိုယ်တို့တွေ့ ပြီဆိုတာ နဲ့ အ ရင်ဆုံး ယွန်း လုပ်ရ မှာ က ကိုယ့်လီး ကိုစုတ်ဖို့ဘဲ….သိပြီလား…”ယွန်း လဲ လီး ကြီး ကိုစုတ်နေ ချိန်မို့သူ့ကိုခေါင်း ညှိမ့်ပြ လိုက်ပါ တယ်..။“ ကိုယ်မ ပြော ရ စေ နဲ့ နော်ကိုယ့်ဘောင်း ဘီဇစ်ကိုဖွင့် … လီး ကိုထုတ်…..ကောင်း ကောင်း စုတ်ပေး…ဟုတ်ပြီလား…ယွန်း….“ယွန်း ခေါင်း ညှိမ့်ပြ လိုက်ပါ တယ်။တော်တော်ကြာ အောင်စုတ်ပေး နေ ရ ပြီး ညီညီက ရပ်ခိုင်း တယ်..။
” လိုး ကြ ရ အောင်..” တဲ့ …။ယွန်း နား ၇ှက်ပါ တယ်..။ ညီညီကြောင့်အ ပျို ရည်ပျက်…လိင်ဆက်ဆံတာ တွေ တတ်သိရ သ လို..သူနဲ့ ကျ မှအ ရှက်ကုန်ရ တာ…ခုလဲ လိုး ရ အောင်တဲ့။ဒီလိုစ ကား မျိုး တွေ ,ယွန်း မ သုံး ခဲ့ ဘူး မ ကြား ခဲ့ ဘူး ဘူး..။ ညီညီက ယွန်း ကိုလှေ ကြီး ထိုး ပုံဆံနဲ့ ဘဲ လိုး တယ်။ ဖြေး ဖြေး ချော့ပြီး သွင်း တယ်..။သွင်း လို့ရ လာ တော့ တ ချက်ချင်း ဖြေး ဖြေး စ လိုး ပါ တော့ တယ်..။ ယွန်း နို့သီး ခေါင်း ထိပ်ဖူး လေး တွေ ကိုလဲ သူစို့လိုက် လျာ နဲ့ က လိလိုက်..လုပ်နေသ လိုနို့တွေ ကိုလဲ အ လုံး လိုက်လက်နဲ့ ဆုတ်နယ်တယ်။
ဒုတိယ အ ကြိမ်ဆိုတော့ ပ ထ မ ဆုံး အ ကြိမ်ထက်တော့ ခံနိုင်လာ တယ်လို့ယွန်း ထင်တယ်။ ညီညီ လဲ မှန်မှန်လိုး ထည့်နေ ရာ က ယွန်းပေါင်တန်တွေ ကိုထောင်လိုက်ပြီူး့လီး နဲ့ ယွန်း စောက်ပတ်အ ၀င်အ ထွက်လုပ်နေ တာ ကိုသေ သေ ချာ ချာ ကြည့်ပြီး လိုး ပါ တော့ တယ်။ ခ ဏ ကြာအောင်လိုး နေ ပြီး မှယွန်း ကိုသူ့အ ပေါ် က နေ စေ ပြန်တယ်။ သူ့လီး ကြီး အ ပေါ် ကိုတက်ထိုင်ခိုင်း တာလေ..။
ယွန်း ကိုဖြေး ဖြေး ထိုင်ချ ဖို့ညီညီက သင်ပေး ပေ မဲ့ ယွန်း လဲ ပ ထ မ ဆုံး မို့သူမ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ဝ ကိုတေ့ ပြီး ထိုင်ချလိုက်တာ ဗြိက နဲ လီး တန်ကြီး တဆုံး ထိဝင်သွား သည်။“အိ အား” “ဟုတ်ပြီ ဖြေး ဖြေး ချင်း ကြွ လိုက် ကျွတ်မ သွား စေ နဲ့ …လီး တ ၀က်လောက်အ ထိကြွ ပြီး ပြန်ထိုင်ချ ပေး မှန်မှန် လေး လုပ်ပေး“ညီညီက အ ပေါ် က တက်လုပ်နည်း သင်ပေး တယ်…။
ညီညီဟာ ယွန်း ရဲ့ ကာ မ ပ ညာ အ တွက်ဆ ရာ ပါ ဘဲ…။ ယွန်း အ ပေါ် က လုပ်နေ တုံး လဲ သူက အောက်က နေ ပင့်ပင့်ပြီး ကော့ လိုး ပေး ပါ တယ်။တော်တော်ကြာ င်္ဒ ပုံနဲ့ လုပ်ကြ ပြီး “ ကဲ နောက်တ မျိုး ပြောင်း လုပ်ကြ စို့…“ တဲ့ ….။ဒီတ ခ့ပြောင်း တာ က တော့ ကျား ကြီး ရေ သောက်…..ဖင်ကုန်း လေး ဘက်ထောက်ပေး ရ တဲ့ ပုံစံပါ..။ ရှက်ပေ မဲ့ သူ့ကိုမ လွန်ဆန်ရဲ သ လိုယွန်း လဲ သူခိုင်း သ မျှ အ ကုန်စုံအောင်လဲ လုပ်ခဲ့ ပြီး ပြီမို့မ ထူး တော့ ပါ ဘူး လေ..။
ဖင်ကုန်း ပေး တော့ သူအ နောက်က နေ ထည့်ပြီ..။ ယွန်း ရဲ့ ခါး သိမ်လေး က နေ ဆွဲ ကိုင်ပြီး သူ့လီး ကိုသွင်း တာ တ ဆုံး ၀င်သွား တော့သူနဲ နဲလေး ဘဲ ဆွဲ ထုတ်ပြီး ပြန်လိုး ထည့်ပြန်တယ်..။ဖြေး ဖြေးချင်း တ ချက်ချင်း အရ သာ ခံပြီး လိုး နေ ပါ တယ်…။ လိုး နေ ရင်း ယွန်း ရဲ့ စ အိုဖင်ပေါက်လေး ကိုစ ပြီး သူက လိပါ ပြီ..။ သူ့လက်ညှိူး နဲ့ က လိတာ ပါ…။ လိုး ဆောင့်ချက်တွေမြန်လာ ပါ တယ်။
အို…သူ့လီး က စောက်ဖုတ်ကိုလိုး နေ တဲ့ အ ချိန်သူ့လက်ညှိုး က လဲ ယွန်း ဖင်ပေါက်လေး ကိုလိုး နေ ပါ ပြီ…။သူတံတွေး တွေ စွတ်ပြီးလုပ်တယ်ထင်တာ ဘဲ…။သူ့အ သံထွက်လာ တယ်..။ ယွန်း ဖင်ပေါက်လေး က အ သဲ ယား စ ရာ လေး….ကျပ်နေ တာ ဘဲ…။ အ ခုလက်ညှိုး နဲ့ လိုး နေ တာ နောင်ကိုကိုယ့်လီး နဲ့ လိုး မှာ…တဲ့ ..။
စောက်ပတ်ကိုလိုး ရုံမ က ဖင်ကိုပါ လိုး မယ်ဆိုပါ လား သူ့လိုး ဆောင့်ချက်တွေ ပြင်း ထန်လာ ပြီ။ ဖတ် ဖတ် ဖတ်ဖတ်…အ သံတွေ မြည်လာ တယ်။သူ့ေ၈ွး စိ၂ လုံး က တ ဖတ်ဖတ်နဲ့ ယွန်း ဖင်ကြား ကိုရိုက်နေ တယ်…။အ ရေ ရွှဲ နေ တဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့ လီး ကြီး ၀င်ထွက်တာ လဲ တ ဖွပ်ဖွပ်မြည်နေ တယ်။အ ချက်၄၀ လောက်မ နား တမ်း လိုး ဆောင့်တယ်။ပြီး တော့ သုတ်ရေ ပူပူတွေ ယွန်း စောက်ခေါင်း ထဲ ပန်း ထုတ်လိုက်ပါ တော့ တယ်။ပြီးပါပြီ။